CDMA iphone4 ဒီ​မှာ​သုံး​လို့​ရ​ပြီ​လား​ — MYSTERY ZILLION
CDMA iphone4 ဒီ​မှာ​သုံး​လို့​ရ​ပြီ​လား​
CDMA iphone4 ဒီ​မှာ​သုံး​လို့​ရ​ပြီ​လား။​
ကျွန်​တော်​တ​ခြား​နိုင်​ငံ​က​ (ဥ​ပ​မာ​ - တ​ရုတ်​) ဝယ်​လာ​ရင်​ဒီ​မှာသုံး​လို့​ရ​မ​လား။​
Network unlock ရ​ပြီ​လား။​
iphone4CDMA က
2G Network အတွက် ဆိုရင် CDMA 800 / 1900 ကို ရပါတယ်။
3G Network အတွက်ဆိုရင်တော့ CDMA2000 1xEV-DO ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
CDMA iphone4 doesn't have SIM card slot and we need SIM slot in here. I don't think you can use in Myanmar!
ဥပမာ-Network unlock ​ပြီ​ဆိုတာ
APN : mms-GPRS
MMSC : http://mms.GSM.co.th:8002
MMSC Proxy : 203.155.200.133
APN Type : MMS-GPRS--
ဒီလိုပါ ရန်ကုန်က CDMA EVDO မှာ MMS ရပါသလား၊
ရန်ကုန် CDMA EVDO မှာ mms ပို့လို့ရနိုင်လားခင်ဗျ...
MMS service ကမရသေးပါဘူး ခင်ဗျာ။
iPhone4s ၀ယ်ရင် unlocked ဆိုရင် www.apple.com မှာဖတ်ရတာက
ရန်ကုန်မှာ၀ယ်ရင် CDMA ရပါသလားခင်ဗျ..
iPhone4S is only available for GSM.
CDMA သုံးဟန်းဆက်ထဲမှာ android platform ကဘယ်အမျိုးအစားမြင့်မြင့်ရန်ကုန်မှာ၀ယ်လို့ရပါသလဲ။
www.amp-guide.com မှာ iPhone 4s ကို CDMA 3G EV-DO Rev သုံးလို့ရတယ်လို့တွေတယ်ခင်ဗျ။
HTC ၀ယ်ရမလား။ Samsung ၀ယ်ရမလား။ iPhone ပဲ၀ယ်ရမလား တွေနေလို့ပါ။
android platform ကိုတော့ပိုကြိုက်ပါတယ်။ iPod 3G လဲရုးရုးမူးမူးဖြစ်နေတော့အကြံပေးကြပါဦး။
ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ Yangon CDMA SIM card ရောထည့်လို့ရမလားခင်ဗျ။
iPhone 4S က CDMAရပါတယ်
I think CDMA network is only use for America.
၂၇.၆.၂၀၁၂ အထိတော့ အားလုံးထင်သလို ဘာမှမရသေးပါသကော....ရသော မမ နက်ဝက်တ် သည် 160 text/ 45 mins voice/1.1mb Data/ အဲ့ဒါတော့ရနေပါပြီ။ iPhone သည် မမလိုင်းကို လုံး၀မထောက်ပံ့ပါ။ ဂျီကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံတကာ တွင်သုံးသော လိုင်းများမဟုတ်သောကြောင့် သုံးမရနိုင်ပါ။ apple ကအိုင်တို့နိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ထုတ်မယ်တော့ကြားမိသည်။ဟီး။